सरकारको लकडाउन झापाबाट १० जना पोखरा कसरी आए ? – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNewsसरकारको लकडाउन झापाबाट १० जना पोखरा कसरी आए ?
सरकारको लकडाउन झापाबाट १० जना पोखरा कसरी आए ?
बैशाख २९ पोखरा : नेपालमा संक्रमितको संख्या १२१ पुगिसकेको छ । संक्रमितहरु मध्ये अधिकांश भारतबाट नेपाल भित्रिएकाहरु छन् ।
कतिपय नेपालीहरु एक जिल्लाबाट समेत अर्को जिल्ला जान र आउन नपाएर कयौं अलपत्र परिरहेका छन भने एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सजिलै आवतजावत गरिरहेका तथ्य फेला पनि परेका छन् । त्यस्तै अति जोखिम मानिएका जिल्लाबाट अन्यत्र जिल्ला पस्नेहरु पनि धेरै मात्रामा फेला पर्न थालेका छन् ।
पोखरा वडा नं. ६ लेकसाइड स्थित गल्ली नं. ९ मा रहेको होटल पिसजोनमा विहान झापाबाट करिव दश जनाको संख्यामा आएका यात्रुहरु लेकसाईड वरीपरी घुमघाम गर्दै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अहिले स्थानिय लगायत पर्यटन व्यावसायी त्रसित भएका छन् ।
उनको घर नेपालनै हो या भारतको हो भन्ने यकिन नभएको स्थानियहरुले गुनासो गरेका छन् ।
झापाबाट कसरी पोखरा छिरे ? भन्ने विषय निकै आश्चर्यको विषय बनेको छ । ढुवानी गर्ने गाडीमा लुकेर या गाडी चालकलाई बढी भाडा तिरेर वा प्रहरी प्रशासनको फितलोपलले आएको हुनसक्ने आशंका ब्यक्त गर्छन् । यता लेकसाइडका स्थानियहरुले कास्की छिर्ने नाकामा कडाइ नभएको प्रशासनको हेलचेक्राई भएको आरोप लगाएका छन् ।
पोखरा वडा नं. ६ का वडा सदस्य तथा समाजसेवी हरि पहारीले उहीहरुलाई क्यारेनटाइनमा राख्ने कुरा भैरहेको जानकारी दिनु भयो । कसरी आए सरकार झापाबाट पोखरा १० जना ? नाकामा फितलोपन जनतामा त्रास । यस्ता संबेनसिल विषयमा सम्बन्धित निकाएको चाँडै ध्यान पुगोस् ।